Waa kuma wasiirka Dawladda Eritrea ee la dhaawacay? - BBC News Somali
Waa kuma wasiirka Dawladda Eritrea ee la dhaawacay?
Xigashada Sawirka, ERi-TV
Wasiirka Macdinta iyo Tamarta dalka Eretrea General Sibhat Efrem
Wasiirka Macdinta iyo Tamarta Eritrea General Sibhat Efrem ayaa la sheegay inuu dhaawacay shaqsi aan haybtiisa la garan, dhaawac culus oo soo gaaray dartiina dibadda loola cararay.
Dowladda Eritrea inkasta oo ay si rasmi ah uga hadlin dhawaca wasiir Efrem loo geystay haddana Danjiraha Eritrea u fadhiya Japan Danjire Istifaanoos Afawarqii oo cambaareeyey dhaawaca loo geystay wasiirka ayaa boggiisa Twitter-ka ku qoray inuu u rajeeynayo caafimaad degdeg dhaawacana uu degdeg uga bogsado.
Itoobiya iyo Eritrea oo 'xalay dhalay' ka noqday colaaddii
"Sibhaat waxaan u rajeeynayaa caafimaad waxaanna si weyn u cambaareynayaa ayuu yiri falka ay dadka fuleyga ah geysteen."
BBC-da oo isku dayday iney arrintaan xog dheeraad ah ka hesho oo la xiriirtay dowladda Eritrea uma suuragelin iney wax xog ah ka hesho dhanka Asmara.
Wasiirka ayaa lagu dhaawacay xilli uu marayey meel ku dhaw guri uu ka degganaa magaalada Asmara shaqsiga weerarka geystayna uu ahaa nin mudda badan meel ugu gabbanayey, waxayna hay'adaha amniga ee Eritrea sheegeen shaqsigii wasiirka dhaawacay iney gacanta ku soo dhigeen.
General Sibhaat wuxuu muddo 19 sano ah uu soo ahaa wasiirka gaashaandhigga Eretria, sanadihii ugu horreeyey ee ay Eritrea xornimada ka qaadatay Itoobiyana wuxuu soo ahaa duqa magaalada Asmara ahna wasiirka Caafimaadka.
General Sibhaat oo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu awoodda badan xisbiga haya talda dalka Eritrea ee EPLF wuxuu sida oo kale xubin uu ka yahay xafiiska siyaasadda dalkaasi laga hoggaamiyo.
13 Disembar 2018
10 qof oo hal qoys ka tirsanaa oo ku dhintay duqeynmaha sii xoogeystay ee Israa'iil
15 Maajo 2021
TOOS Israa'iil oo duqeysay guriga hoggaamiyaha Xamaas
Colaadda Isra'iil iyo Falastiin oo ka dhex qaraxday barta TikTok